किन अपराधको पक्षमा सांसद ?
वाशुदेव वाग्ले -
संसद विधि बनाउने थलो, त्यही संसदका सांसद फौजदारी अभियोग लागे पनि सांसदपद निलम्बन गर्न पाइन्न भनेर कानुन बनाउन थालेका छन् । यो आश्यर्च भनेको मान्छेले कुकुर टोकेजस्तो भएन र ? बिधिको शासनमा बस्छु भनेर सपथ खाने, बिधि मिच्ने र लोकलज्जाको पनि बेवास्ता गर्ने यो प्रवृत्ति अराजक छ ।
ओली सरकारको एकमात्र लक्ष्य सुशासन, सम्बृद्धि र समानता हो । यसमा दायाँबायाँ हुन्न भनेका छन् प्रधानमन्त्रीले । अव त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनिसक्यो र यो बृहद पार्टीले बिधिको शासन, लोकतन्त्र र जनअपेक्षामा कुनै तलमाथि हुनेछैन भनेर बचन दिएको छ । त्यो बचन कार्यान्वयन गर्ने हो भने किन अपराधको पक्षमा छन् सांसद ? यसमा छलफल गरेर नेकपा बिधिको शासनमा उभिनैपर्छ ।
बनेको नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसद पक्राउ पर्ने बित्तिकै स्वत: निलम्बित हुने व्यवस्था छ । यस्तो हुन्न, सांसद निलम्बन गर्न पाइन्न भन्ने आवाज संसदमा घन्किएको छ । संसारमा नभएको अभ्यास नेपालमा हुँदैछ । एमालेको अडान छ– फौजारी अभियोग लागेर पक्राउ पर्ने बित्तिकै स्वत: निलम्बित हुने व्यवस्थासहित नियमावली पारित गर्नु पर्छ । अव त संसदमा नेकपाको दुई तिहाई मत नै छ, अर्को चुनावमा तीन चौथाई जित्ने दावी प्रचण्ड ओलीले गरेका छन् । छन् भने विधिको शासनमा नेकपा किन पछि हट्ने ? प्रतिपक्षसँग किन झुक्ने ? अपराधिकरण बढाउने कुरा कम्तिमा नेकपाले गर्नुहुन्न, अन्यथा अराजकता बढ्नेछ ।